Ukuvela kweendlela ezintsha kwiinkalo ze-cosmetology ngokubanzi kunceda ubomi babasetyhini banamhlanje, bancedise ukuba basebenze, bafunde, bavelise abantwana, kwaye bangakhathazeki ngokubonakala kwabo, ukuba izimonyo ziya kuhamba okanye ziphele, i-smazhaetsya.
Enye yale mizila emitsha ibhentshi lokulahla, njengenye indlela yokutsala kunye nokudweba amacwe ukuba ubone ukufaneleka kunye nokuxinwa.
Amanqabana, ubunzima babo kunye nokuma kwabo badlala enye yeyona nto ibalulekileyo ebomini babantu, kuba iilebhu ezinika umlingiswa womnini wazo, impilo yakhe, igxininisa ubuntu bomntu, kwaye ukuma kunye nobude bamashiya kuya kunceda ukufihla iimpazamo zangaphandle, kwandisa okanye kumancinci , unike nantoni na - ukusuka kumangaliswe kumsindo.
Ngokuqhelekileyo, i-browsers yababhinqa ayinangqiqo kwaye ayifani ncinane kakhulu, ngoko ke abafazi kufuneka bawutyonge rhoqo ukuze bawanike iimeko ezifanelekileyo. Kule meko, abaninzi abafazi basebenzise izinto ezinemibala engaqinisekiyo, njengepensile ye-eyebrow, engaqinisekanga ngaso sonke isikhathi isiphumo esihle kunye nembonakalo enhle.
Yintoni ibonti yamaconco kwaye yintoni eyichaphazelayo kwiindlela eziqhelekileyo zokukhutshwa kweyeshiya ngoncedo lwezonyamelo zokuhlobisa, yintoni imifanekiso yokubhenca engcono kuneziqholo eziqhelekileyo zokuhlobisa? Impendulo ilula - itekisi yamaconci inceda ukugcina isimo esona sigxina seelishi ixesha elide, kuphela ukususa iinwele ezininzi ngokwexesha elide, kodwa ke, akunakwenzeka ukuba zithathele iziqhumiso eziqhelekileyo zokuhlobisa.
Ngokuxhomekeke kumsebenzi kunye neempawu zomntu ngamnye wangaphandle, i-salon enobuhle inokwenza umboniso weerishi usebenzisa iindlela ezimbini - "iinwele ezinwele" okanye "ukucuthwa okulula." Inkqubo yokubhala amathambo "iinwele kwiinwele" isetyenziswe ukuba umthengi unamaconsi, umongo wawo kufuneka ulungiswe okanye uvele unike iilebe ubuninzi. Kule meko, inkosi inika iinwele nganye kwindawo yecala, ngokwahlukileyo, ezinika amaqabunga ukubonakala kwendalo nemvelo, kungekho "peyinti" ecacileyo. Umbala wepeyin ukhethwe ngabanye, ngokuqwalasela umbala wendalo weenki. Le ndlela yokuloba amanxeba yenza ukuba kunokwenzeka ukudala uhlobo oluninzi lwamaqabunga, kwaye nangaphandle kokuvavanywa okufutshane kunzima ukuqagela ukuba ubunzima kunye nokubunjwa kweelishi akuyinto engokwemvelo, kodwa kulungiswe ngoncedo lokubhala tattoo.
Kunconywa ubuchule bokuthi "ukubutha ngokukhawuleza" kulawo matyala xa iilishi zomxhasi zingabonakali, zilula okanye zingekho ngokupheleleyo kwiinki. Ukulungisa le mpazamo, inkosi ngokufanelekileyo kufuneka ibuye ibenze neenki, kwakhona ukuba ibone umongo kunye nobude obuyimfuneko. Xa uthayibha amacandelo anjalo, umninimzi uthungela upende, udala umphumo weenki. Eyona nto ibaluleke kakhulu itekisi yamacwe kulabo bantu, ngokusemvelo, banomlenze omncinci okanye unobumba ongasigxininisi ubuso, kodwa unika ubungqina obubi okanye bubuhlungu. Kule meko, inkosi ayiyikuyenza nje tattoo ngokwayo, kodwa iphinda iphinde ifake umlo weeshiya, ingqwalasela iimpawu zomntu ngamnye.
Zonke iintlobo zeenkqubo zokubhala i-tattoo zisoloko zingenabuhlungu, ngaphantsi kwefuthe leemithi zentlungu. Kwiintsuku ezimbalwa zokuqala emva kokubhala umbala, umbala ogqithiseleyo unokwenzeka kunomthunzi okhethwe yinkosi. Kodwa ungakhathazeki ngako, kuba ezinsukwini ezimbalwa ubukhulu bombala buya kuhla.
Kodwa zonke ezo zinto zenzelwe kuphela ukugxininisa ukubonakala kwendalo kunye neenkomfa, kwaye ukudala umfanekiso ngokuhlwa kwamanzi, kusasa kufuneka unike iilebe ngombala ogqithiseleyo, ekubeni ipende yenzelwe ukukhanya kwendalo, kwaye ayiyiyo into eyenziwa ngayo.
Ukuzalwa komntwana lixesha lokudala
Ngubani na osapho kwengqondo?
Indlela yokugqoka i-corset
Ukuxiliswa kwiindawo zoluntu